Wed, May 23, 2018 | 11:14:38 NST
12:33 PM (8 months ago)
सुमन शर्मा / जापान
प्रश्नः म हाल जापानमा रहि , नेपालमा गएर गाई भैंसी पालन गर्ने सोचमा छु। यसको लागि सरकारी पक्षबाट मैले के सहयोग (अनुदान रकम) पाउन सक्छु ? हालको लागि सरदर १० वटा भैसि पालन गर्न कती रकम सहयोग स्वरुप मिल्छ ? र काहाँबाट त्यो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अनी १-२ महिने तालीम पनि लिन चाहान्छु। जानकारि पाए आभारी हुने थिएँ।
उत्तरः कृष्णप्रसाद खनाल, निर्देशक, व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र - उहाँले बाहिरबाट आएर यहाँ व्यवसाय गर्ने सोच राख्नु भएको छ यो एकदमै राम्रो हो। उहाँका लागि मात्रै होइन देशकै लागि राम्रो हो। ऋणको कुरा छ कृषिजन्य व्यवसाय गर्नेहरुलाई अहिले विभिन्न बैंकहरुले कृषिमा ऋण दिइरहेका छन् त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। पशुपालन तालिमको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले त्यस्ता तालिम दिइरहेको हुन्छ त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला। पशुपालनबाट सामाग्रि उत्पादन गर्ने खालका तालिम चाहिएमा व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला।